Ihe I Kwesịrị Knowmara Banyere Ecommerce Keywords | ECommerce ozi ọma
Ihe I Kwesịrị Knowmara Banyere Ecommerce Keywords
Mgbe ị nwere saịtị e-commerce, echiche a bụ na ọtụtụ ndị na-azụ ahịa dị ka o kwere mee nwere ike ịchọta ya. Maka nke a, ọ dị mkpa iji mepụta a ziri ezi isiokwu nnyocha maka ecommerce.
Achọpụta isiokwu maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, Ọ kwesịrị ịdabere na ịchọpụta ndị bụ ndị na-achọ ịchọta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ enyere. E kwesịkwara iburu ụzọ esi kọwaa ngwaahịa ndị a na saịtị azụmahịa e-commerce na mgbakwunye, otu ụzọ ndị mmadụ si akọwa ngwaahịa a. ngwaahịa ma n'ịntanetị ma n'ịntanetị.
Iji chọpụta ụdị ndị na-achọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ a na-enye, ị nwere ike iji a ngwá ọrụ dị ka Google Analytics, nke na-enye akụkọ nke saịtị ahụ site na iji ajụjụ ọchụchọ a rụrụ. I nwekwara ike iji ngwa Google Adwords, yana ngwaọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ.
Ihe dị mkpa ebe a bụ ilekwasị anya na ndị niile ahụ Keywords ndị dị mkpa maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ rere na saịtị ahụ. Echefula ụzọ ndị mmadụ na-ejikọ na saịtị ahụ, n'ihi na nke a nwere ike ịkọ ọtụtụ ihe gbasara ihe ha chere gbasara ngwaahịa ma ọ bụ akara ahụ.
N'ezie, otu n'ime akụkụ kachasị mkpa na isiokwu ọchụchọ maka Ecommerce Ọ nwere na nyocha nke asọmpi ahụ. Site na ụdị nyocha a, ị nwere ike ịmụ etu ndị ọzọ si akọwa ngwaahịa gị yana isiokwu ndị ha na-eji eme njem karịa, gụnyere ịre ahịa ahịa eji ngwa ahịa gị ma ọ bụ mgbasa ozi ọkọlọtọ.
Ma obi abụọ adịghị ya bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa na Isiokwu Nnyocha maka Ecommerce bu n'uche ebumnuche nke ndi na-acho Intanet. Nke ahụ pụtara, ọnọdụ uche ha mgbe ha na-eme nyocha ha; ọ bụrụ na ha dị njikere ịzụta ngwaahịa ma ọ bụ na-achọ ihe ga-enyere ha aka ime mkpebi ịzụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ọzụzụ ECommerce » Ihe I Kwesịrị Knowmara Banyere Ecommerce Keywords
Kedu ihe kpatara nchịkọta Google ji dị mkpa maka Ecommerce gị?
Etu ị ga - esi mepụta ụlọ ọrụ ecommerce ndị ọzọ nwere ike ịba uru